Darasada iyo diiwaangelinta ASOJ ee dilalka,xarig iyo hanjabaadaha 2000 - 2007
Monday July 05, 2010 - 04:40:38 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Tel:+254-722467335 +2521-253733 +2521-658289. Website:www.asoj.org
Inkastoo saxaafad madax banaan oo xor ah ay ka hanaqaaday dalka baaba?san ee Soomaaliya,hadana Marxalada adag ayey ku shaqeeyaan weriyeyaasha Soomaalida ee ku sugan gudaha dalka,sidaas oo ay tahay ma jirto weriyeyaasha dhexdooda isku xirnaan weyn ,oo waa kuwa ay kala jiidaneyso dabeysha siyaasadaha qalafsan ee ka jira dalka.
Wixii ka dambeeyey sanadii 2000,waxaa soo badanaayey tacadiyada loo geysto Weriyeyaasha madaxa banan ee ka howlgala Somaliya,gaar ahaan kuwa ku dhaqan Magaalada Caasimada ee Muqdisho..
26,January,2000 weriye ka tirsan Codka shacabka oo lagu magacaabo Axmed Kaafi Awale ayey kooxo burcad ah oo hubeysan ku dileen Suuqa bakaaraha xilli uu gudanaayey howlahiisa shaqo .
27.Augost 2001,isla magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland waxaa lagu xiray Bile Max?ed Qabowsade iyo Max?ed Sa?id oo ka kala tirsanaa wargeysyada Soyal iyo Yool,kadib markii lagu eedeyey iney daabaceen warbixino wax u dhimayo amaanka.
17 January,2003 kooxo hubeysan oo ka amarqaata Ganacsade Maxamed Deylaaf ayaa albaabada u laabay Idaacada iyo Tvga Horn Afrik ee Muqdisho.
June,2003,C/raxmaan Xudeyfi iyo Xuseen Geedi Xeynuuf oo ka tirsanaa Radio Banadir ayey xabsiga dhigtay dowladii Carte ee Cabdi qasim madaxda ka ahaa.
9 Febraury 2005,waxaa banaanka hore ee Hotelka Saxafi ee Magaalada Muqdisho lagu toogtay Kate Peyton oo barnaamij soo saare ka aheyd BBC-da .
23 june,2006,Waxaaa fagaaraha Tarabuunka ee Magaalada Muqdisho lagu dilay Weriye filimqaade ahaa oo Swedish ah Martin Adler oo ahaa weriye Madaxbanaan.
24 Octobar,2006 waxaa dowlada Federalka KMG ay xirtay Weriyeyaasha kala ah,Fahad Maxamed Abukar oo ka shaqeynayey idaacada Warsan,Maxamed Cadaawe oo ka tirsan Warbaahinta Shabeelle iyo Muqtaar Maxamed Catoosh ,Weriyaha Horn Afrik ee gobolada Bay iyo Bakool.
2 Janaury 2007,weriyeyaal ka tirsan wargeyska Haatuf ayaa la xiray kadib markii lagu eedeyey iney warbixino isdabajoog ah ka qoreen qoyska Madaxweynaha Maamulka Somaliland Daahir Riyaale Kaahin,waxaana Maxkamada Somaliland ay ku xukuntay 2 ilaa 2 ? sano iyo bar xabsi ah
9 Maarso, 2007 Xasan Sade Dhaqane oo ka tirsanaa Shirkada Warbaahinta Horn Afrik ayay Xabsiga dhigtay Dowlada Federalka Kumeel Gaarka .
4 April 2007 Agaasimaha Tv-ga Universal Xafiiska Muqdisho C/qaadir Maxamed Cashar Nadar,Weriye Bashiir Diiriye Naaleeye iyo filmqaade Xaamid Maxamed Cusmaan oo intaba ka tirsan Tvga Universal ayey xirtay DFS, iyagoo xornimadoodii dib u helay,22 May sanadkan 2007
21 April 2007 madaafiic dhowr ah oo lagu garaacay idaacada Horn Afrik waxaa ku dhaawacmay Weriye Yaxye Cali Faarax iyo Filimqaade Cabdi Dhaqane Ciye.
5 May 2007 Weriye Maxamed Cabdullaahi Khaliif ayaa toogasho lagu dilay maamul goboleedka Puntland .
Waxaa intaasi sii dheer weriyeyaal badan oo jirdil ay DFS ugu geysatay magaalada Muqdisho Ismaaciil Cali Cabdi Taxte, Maxamed Raage oo idaacada shabelle ka tirsan,sidoo kale waxaa Baydhabo lagu jirdilay Wariyihii gobolkaas ee Idaacadda Shabelle Maryan Maxamud Barre oo loo yaqaan Maryan Qalanjo, iyadoo xafiiskii Idaacada Shabelle ee magaalada Baydhabana la xiray.
05/07/2007 Maamulka Puntland ayaa shaqa joojin aan sharci ahayn ku sameeyay Wariyaha BBC ee goboladaas Axmed Kismayo
Sidoo kale waxaa jira handadaadyo dhowr ah oo si isdaba joog ah loogu geysto Hadaba xilligaan oo lagu tilmaami karo inay tahay xilligii ugu xumaa ee Warbaahinta waxaa sii badanaya tacadiyada lagu hayo,waxaana dhowr mar ay dowlada xirtay Idaacadaha Muqdisho,sida Shabelle,Hornafrik ,IQK iyo Telefishinka Al Jazeera Xafiiskiisa Muqdisho.
Farduusa Max?ed Cabdulle. .